सरकारको उपस्थितिको सन्दर्भ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / सरकारको उपस्थितिको सन्दर्भ
Posted by: युगबोध in विचार September 20, 2019	0 41 Views
ताल्चा विमानस्थलको छेउमा पुगेपछि गाडी अगाडि बढ्न सकेन। कारण बाटोमा ट्रक दुईदिन अघिदेखि बिग्रिएर बसेको थियो। ट्रकको सामान प्लेनबाट आउनुपर्नेमा आएको थिएन। त्यसको पनि कारण थियो। महंगो भाडा पाउने भएकाले प्लेनहरु हुम्लातिर उडिरहेका थिए मानसरोवर जाने विदेशी यात्रीहरु लिएर। हामीले त्यही बाटोमै गाडी छोडेर आफू मात्रै अघि लाग्यौं। हामी मात्र होइन रारा भ्रमणमा आएका आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक सबैको हालत हाम्रो जस्तै थियो। सबैले गाडीहरु बाटोमै अलपत्र छोडेर पैदल यात्राका लागि साहस गरिरहेका थिए। भोलिपल्ट फर्कदा प्लेनबाट सामान आएपछि बिग्रिएको उक्त मालबाहक ट्रक त बनेछ तर फेरि एक किलोमिटरको दूरीमा अर्को ट्रक बिग्रिएछ बीच बाटोमै। पहिलो दिन माथितिर जादा एउटा ट्रकले दुःख दियो। अब तलतिर फर्कौं भन्दा फेरि अर्को ट्रकले दुःख दिने भयो भनेर यो मनमा पिरलोको पहाड अग्लिएको महसुस भयो।
जुनसुकै कुराको पनि सीमा हु“दोरहेछ। त्यतिबेला दुःख पाइरहेका मानिसहरुको पनि सीमा नाघिसकेको थियो। जाममा परेका सबै गाडीका स्टाफ र यात्रीहरु मिलेर ट्रकको साहुलाई बोलाए। ट्रक तान्नका लागि डोजर बोलाए। अनि सबै लागेर बीच बाटोमा क्लज प्लेट गएर बसेको ट्रकलाई तान्ने र धकेल्ने अभियान शुरु भयो। डोजरले अगाडिबाट तान्दै थियो भने मानिसले पछाडि र वरिपरिबाट धकेल्दै थिए ट्रकलाई। ट्रक भने हलचल नगरेर गजधम्म बसिरहेको थियो रिसाएको कालो पहाड झै। विपतको यो बेलामा मानिसहरुले सरकार खै भनेर हारगुहार र सत्तोसराप गरिरहेका थिए। मैले केही हा“सो र केही सा“चो मिसाएर ‘म छु हजूर’ भन्दै पीडालाई विषयान्तर गर्दै थिए“। एवं रितले तान्ने र धकेल्ने कार्यले मात्र सम्भव नभएपछि डोजरले ट्रक हिड्नेतिरको बाटो ओरालो हुनेगरी माटो फाल्यो। ट्रक र सयौं मानिसको तीन घण्टासम्मको अनवरत परिश्रम पश्चात साना गाडी आवतजावत गर्न मिल्ने गरी ट्रकलाई साइड लगाउन सकियो। त्यसपछि भने मानिसहरु खुशीले मुस्कुराउ“दै गन्तब्यतिर लागे। हामीले पनि त्यसै ग¥यौं।
मलाई भने पीडामा पर्दा मानिसहरुले सरकार खै भनेर हारगुहार र सत्तोसराप गरेका स्वरहरुले यात्राभरि चिमोटिरहे। मानिसहरुले केही होला भनेर सत्तामा पठाए नेताहरुलाई। त्यत्ति मात्र नभइ दललाई समेत बहुमत पुग्नेगरी जिताए। तथापि सरकार त हराएछ गाउ“ र बस्तीबाट। दुःख र पीडामा सरकारको उपस्थिति नहु“दोरहेछ गाउ“ र वस्तीहरुमा। सा“च्चि मैले पनि सरकार कतै देखिन। सुर्खेतबाट रारासम्म पुग्दा पनि कतै देखिन। कालीकोटसम्म परीक्षाका गोप्य सामग्री लिएर जा“दा पनि कतै देखिन। जुम्लामा किसानका स्याउका रहरलाग्दा दाना बारीमा झरेर कुहिन लाग्दा पनि कतै देखिन। सिञ्जाको सडकमा हिलोमा गाडी डुब्न लाग्दा पनि देखिन। राराको छेउमा पुग्दा बाटोमा पहिरो आएर दुईघण्टा बढी पैदल हिड्दा पनि देखिन। रारामा पुगेर होटलको साहुजीलाई ‘आलु त उसिनेर देऊ’ भन्दा ‘सक्दिन’ भनेर ओठे जवाफ पाउ“दा पनि सरकारलाई कतै देखिन। यस्तो लाग्छ सरकार अरु केही विशेष काम परेको कारण विदा लिएर बसेको होला आजभोलि। वा बिरामी भएर आफ्नै उपचारमा जुटेको होला आजभोलि।
ताल्चामा गोर्खाबाट आएका एक जोडी अधबैशेका कुराहरु सुन्दा उनीहरु प्लेन नआएका कारण बेखर्ची भएर हप्ता दिनदेखि ताल्चाकै विवेक गेष्टहाउसमा बसिरहेका रहेछन्। प्लेनहरु भने बढी रकम असुल्ने स्थानतिर उडिरहेका रहेछन्। सायद सरकारको उपस्थिति नागरिकको सेवासुविधास“ग गा“सिएका यस्ता कुराहरुमा पनि देखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सा“घुरो, हिलाम्मे र जतिबेला पनि माथिबाट र तलबाट पहिरो जान सक्ने जोखिमपूर्ण सडकमा ठूला ट्रकहरु त्यो पनि तोकिए भन्दा बढी भार बोकेर सकिनसकी घस्रिदारहेछन्। सडकमा कुद्ने गाडीहरु ठूला भए पनि गाडी चलाउने गुरु भने आधारभूत तहकै पढाइ छोडी उमेर बढाएर नागरिकता र लाइसेन्स हात पारेका र देख्दैमा चिचिला नाबालक भन्नलायक अनुहारहरु हुदा रहेछन्। सायद यस्ता सवालहरुमा पनि सरकार कतै त देखिनुपर्ने हो। तथापि नदेखिदोरहेछ। बरु उल्टै कसैले देख्छन् कि भनेर लुकेर बस्दोरहेछ।
मैले त पत्रपत्रिकामा अध्ययन गरेको र कतै कतै त आफ्नै आ“खाले पनि देखेको, सुशासन भएका विकसित मुलुकहरुमा सरकार जनजीवनस“ग स“गै जोडिएर हि“ड्दोरहेछ। यहा“ त जनताले दुर्घटना भयो, दुःख पाइयो भनेर हारगुहार गरेपछि मात्र त्यसको भोलि वा पर्सिपल्ट औपचारिकता निर्वाह गर्ने गरी सरकार यदाकदा देखिने गर्दछ। समुन्नत देशहरुमा भने घटना भएको निमेषभरमै सरकार उपस्थित हुने गर्दछ। सरकार कतै कसैले अख्तियारको दुरुपयोग ग¥यो भने पनि उपस्थित हुने गर्दछ। सरकार नागरिकको पीडामा उपस्थित हुने गर्दछ। यहा“सम्म कि कतै बच्चा रोएको आवाज सुन्यो भने सरकार उक्त घर पुग्छ। पति पत्नीको कलहको कारण अस्वाभाविक आवाज बाहिर सुनियो भने पनि सरकार भित्र पस्ने गर्दछ। कतै विद्यालय जाने बालक सडकमा देखियो भने पनि सरकार उपस्थित हुन्छ। कतै उपचारको अभावमा नागरिक मृत्युको मुखमा पर्ने स्थिति भयो भने पनि सरकार त्यहा“ उपस्थित हुन्छ। यहा“ त सुन्ने कान र देख्ने आ“खा नभए जस्तै गरी यस्ता कुराहरुमा बिल्कुल बेखवर हुन्छ सरकार।
जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रका शिक्षकहरुस“ग भलाकुसारी गर्दा जानकारी भएको थियो, हिजो अस्ति विद्यालयको राहत र निजीस्रोतको शिक्षकका काम गर्नेहरु अहिले गाउ“का जनप्रतिनिधिहरु भएका छन् रे। अलि अलि पढेलेखेका हु“दा अरुको तुलनामा तिनैलाई कामको चटारोले भ्याइ नभ्याइ छ रे। ठेकेदार पनि आफै भएका छन् रे। कसैलाई कसैस“ग बोल्ने फुर्सद पनि छैन रे। सबैले डोजर र स्क्याभेटर खरिद गरी बाटो खनेर विकासको मूल फुटाउ“दैछन् रे। छिटो देखिने विकास भनेकै त्यही हो रे। एकपन्थ दुई काज, एकातिर आफूलाई पनि हुने अर्कोतिर जनताको आ“खामा बाटो पनि देखिने। शिक्षामा त कसैको चासो नै छैन रे। किनभने त्यसको असर छिटो देखिदैन रे। शिक्षामा त काम गर्ने कर्मचारी पनि छैनन् रे। आफूलाई साथ दिने शिक्षक काजमा ल्याएर काम चलाएका छन् रे। यस्तै गर्नका लागि स्रोतब्यक्तिलाई लखेटेका हुन् रे। त्यही भएर शिक्षाको संरचनाको काम छैन भनेर नाम मात्रको बनाइएको हो रे।
भलाकुसारीकै क्रममा कालीकोटका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले आफ्नो कार्यालयको भोगाइलाई यसरी अभिब्यक्त गरे– ‘कार्यालयकै कामविशेषले म कतै जिल्ला बाहिर जानुप¥यो भने म पछिको निमित्त हाकिम हुने एकजना कार्यालय सहयोगी छन्। कहिलेकाही त उपस्थित नभइ नहुने बैठकहरुमा आफू जिल्ला बाहिर हु“दा उनैलाई जान भन्छु। उनलाई पनि के–के न भएको अनुभूति हु“दोरहेछ क्या रे, बैठकमा सानका साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छेउमा बसेर ‘कार्यालयको प्रतिनिधिको तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएको अवस्था’ भनेर फेसबुकमा फोटो शेयर गरेका हुन्छन्।’ त्यही अफिस हो कुनै बेला उपसचिवको नेतृत्वमा आधा दर्जन जति अधिकृत र दर्जन जति अधिकृत स्तरकै स्रोतब्यक्तिहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था थियो। अब सायद त्यो जनशक्ति चाहिएन क्या रे। शिक्षामा विकास धेरै भएको महसुस गरेर होला, अनुगमन पनि गर्न पर्दैन क्या रे। त्यसैले यसलाई डाउनसाइजिङ गरिएको होला। त्यही भएर तल–तलसम्मका सरकारहरुमा पनि शिक्षाका कर्मचारी नपठाएको होला।
यो पङ्तिकार शिक्षातिरको भुक्तभोगी भएकोले अलि बढी शिक्षातिरको कुरा उठाउनु स्वाभाविक पनि हो। तथापि ब्यथा सबैतिर उस्तै छ। थाङ्ने कर्मचारी भन्नेहरुले समायोजन टुङ्गिसक्यो भने पनि स्वास्थ्यको समायोजन अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। शिक्षाको अनङ्कित कर्मचारीहरुको पनि बा“की नै छ। समायोजन भएका ठाउ“हरुमा पनि अस्तब्यस्त छ। कतै कर्मचारीले काम पाएका छैनन् भने कतै कामले कर्मचारी पाएको छैन। काम त झन राम्रो गर्नका लागि पो गर्ने हो, भताभुंग गर्नका लागि किन गरिएको होला ? अस्तब्यस्तको अवस्थालाई समुन्नति भन्ने जमाना आएछ क्या रे। एकजना साथीले यो संघीयता टिक्छ र ढल्दैन भन्ने कुरामा यसरी तर्क दिएका थिए – ‘यसमा सबै नेता र कार्यकर्ताले रोजगारी पाएका छन् । जागिर पाएका छन् ।
सेवासुविधा पाएका छन्। त्यसैले जनताले केही नपाए पनि यो संघीयता टिक्ने कुरामा कुनै शंका छैन।’ मलाई पनि उनले भनेको कुरामा दम छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले त यहा“ सरकार कता छ भनेर दिउ“सै दियो बालेर खोज्ने अवस्था हु“दा पनि सरकारकै जीहजूरी र चाकरी चलिरहेको छ।
सरकारले गरेका नराम्रा कामहरुको आलोचना र विरोध गर्ने नागरिकको अधिकार त छैन भने पनि हुन्छ । किनभने विरोध गर्नेलाई मिलाई–मिलाई तह लगाउने काम जारी छ भने जीहजूरी गरेर पछिपछि लाग्नेहरुलाई सेवासुविधामा बढोत्तरी गर्ने क्रम पनि जारी छ। यतिखेर मलाई भने हिन्दी फिल्म अन्धा कानुनको सम्झना आइरहेको छ। अभिताभ बच्चनले अभिनय गरेको उक्त फिल्ममा आफ्नी सानी छोरी रु“दा उनले ‘रोते रोते हस्ना सिखो हस्ते हस्ते रोना’ गीत गाएर छोरीलाई फकाउ“छन्। पछि अमिताभ जेलमा परेको बेला आखा भरि आसु पारेका
आफ्ना बाबा अमिताभलाई छोरीले पनि त्यही गीत गाएर फकाउ“छिन्। त्यसरी नै यो अहिले सत्ता र सरकारका मान्छेहरुले आफू सत्तामा जाने समयमा पुरानो सत्ता र सरकारलाई ‘उठ जनता नमानी डर, यो सरकारको भरोसा के छ र ?’ भनी गीत गाउ“दै अघि बढेको म आफैले देखेको हु“। सरकारले समयमै आफूलाई सच्याउने होइन भने अन्धा कानुनमा झै यता पनि ‘उठ जनता नमानी डर..’ भन्दै त्यही गीत गाएर यो सरकारको विरुद्ध मानिसहरु उठ्दैनन् भन्ने के ठेगान ? संविधान दिवसको उपलक्षमा सबैलाई चेतना भया।
Previous: संविधानमा नलेखिएका सबै कुरा चियागफ हुन्
Next: मूल कार्यभार संविधान कार्यान्वयन